Garoonka kubadda Cagta ee IFC oo qeyb ka qaatay is-dhexgalka Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Uganda | Garoonka kubadda Cagta ee IFC oo qeyb ka qaatay is-dhexgalka Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Uganda | Hal Sheegaha La Hubo
Garoonka kubadda Cagta ee IFC oo qeyb ka qaatay is-dhexgalka Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Uganda
Waxaa ii suurta gashay inaan booqdo Garoonka kubadda Cagta eeI nternational Fustal Courts (IFC), kaasoo markaad gudaha u gasho bilicdiisa iyo nuurkiisa indhahaaga soo jiidanayo.
Garoonka (IFC) wuxuu ku yaalaa xaafadda Soomaalida ku badan tahay ee deegaanka Mengo ee Caasimadda dalka Uganda ee Kampala, waxaana ku ciyaara har iy o habeen kooxo kala duwan oo Soomaali iyo dadka u dhashay dalka Uganda, wuxuuna ka kooban yahay labo qeybood, waana Garoon kor ka dadan oo xili kasta lagu ciyaari karo, wuxuuna uga duwan yahay Garoomada kale ee ku yaala dalkan Uganda waxyaabo badan, wuxuuna ka kooban yahay labo qeybood oo leh roog ka sameysan Cows.
Sidoo kale wuxuu leeyahay Makhaayad heerkeeda uu aad u sareeyo, taasoo laga heli karo raashinka iyo cabitaanada noocyadooda kala duwan yihiin iyo weliba adeegyo kale oo dheeraad ah.
Intii aan ku sugnaa Garoonka (IFC) waxay maamulka ii sheegeen in dhawaan ay ku soo kordin doonaan Garoonka qeybta jirdhiska (GYM) iyo weliba Dhalooyin Flat-Screen ah oo lagu xaysiisan karo shirkadaha islamarkaana laga fiirsado ciyaaraha Caalamiga ah.
Garoonka (IFC) waxaa maal-geliyey dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasoo runtii la dhihi karo waa kuwo ku dayasho mudan.
Garoonka (IFC) waxaa maamula Maamulayaal Alle uu hibeeyey karti, hufaan, dulqaad iyo dabeecad wanaag, taasoo dadka Garoonka u soo daawasha taga kawada maqsuudeen.
Garoonka (IFC) maamulkiisa waxaa gacanta ku haya xubnahan magacyadooda hoos ku xusan yihiin.
1- Yaxye Ciise oo ah (CEO)
2- Cabdirisaaq Maxamed oo ah (HRO)
3- Muqtaar Yuusuf Yaxye oo ah (AM)
5- Ciise Cadde
4- Shash Wazier Shiraz oo ah (OM)
Garoonka (IFC) waxaan dhawaan lagu qabtay ciyaaraha Maamul Goboleedyada dalka, kaasoo ay qaaday kooxdii ku ciyaaryeysay mMaamulka Galmudug halka kaalimaha 1-aad iyo 2-aad ay galeen Banaadir, Hirshabeelle.
Ciyaarahaas intii ay socdeen waxay sababtay is-dhexgalka Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Uganda, waxaana meesha ka baxday waxyaabihii kale oo dhalinta Soomaaliyeed ka sheekaysan jireen oo ay kow ka tahay qabyaaladda dalkeenna ragaadisay ama la degtay sabanadii la soo dhaafay, waxayna taa beddelkeed iminka dhalinta ka sheekaystaan ciyaaraha maxaayeelay ciyaarta Kubbadda Cagta waxay keentaa jir caafimaad leh, waxayna abuurtaa jawi nabadeed oo ay ku dheehan tahay nolol faraxd leh.
Ugu dambeyntii maalin weliba waxaa Garoonka (IFC) u soo daawasha taga Soomaali faro badan iyo dadka dalkaan u dhashay, waxaan Soomaalida ka sokow xitaa waxaa ku ciyaara kooxo ciyaartooy u dhashay Uganda.
W/Diyaariyey:- Axmedsaadaq Yuusuf Maxamed